Lobubi credit esijikelezayo
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Lobubi credit esijikelezayo
I-credit card, kukho kwinyanga ezayo esisixa okanye ngezavenge, ezifana olujikelezayo ngetyala nezinye iindlela yentlawulo kodwa, izavenge kunye olujikelezayo ngetyala ziya inzala umdla. Njengokuba kuchazwe njengoko nezingeloncedo olujikelezayo ngetyala, usenokuba ukuba umyinge wenzala wenzala eliphezulu.
amazinga aphezulu umdla ngaphezu esisikhupheli sokuxhaphakileyo
olujikelezayo sentengo yemboleko asikho phantsi, ezifana Money nokuboleka Law Business and Inzala Rate Somqathango uMthetho. Kuye kwasekwa yi ukuzeyisa yi-Credit Association. Yeyona uMthetho Investment ukuba isiseko somthetho. Eli lungiselelo kwi umyine wenzala yi-20% okanye ngaphantsi, olujikelezayo yeentengo zemboleko umyinge wenzala wenzala sicaca lo mda. 15% yereyithi wenzala usoloko ngetyala esijikelezayo kukuthi, umzekelo, uthelekiso enjalo xa iseti esisikhupheli sokuxhaphakileyo ephakamileyo engaphantsi kwe-200,000 yen.
In-mboleko khadi, ezifana inzala zebhanki ibekwe ibe ngaphantsi, izinga lenzala kwelona tyala zilandelayo yen yezigidi-1 ukusuka 12.6% 14. 6%, waba kucwangciso olusezantsi ngaphezu lenzala inzala eye isetyenziswe ajikelezayo ngetyala. Kwinkampani ngetyala, olujikelezayo ngetyala kuye indlela ezinokuthi nkulu ingeniso umdla bayafihlwa kumsebenzisi, umyalelo, ezifana kwi umabonwakude ye-CM, sele becula lula, hayi ze ohambisana nenzuzo ezifana kuwe.
esisikhupheli sokuxhaphakileyo kunye nemali kwabathengi apho, naye ukuba unengxaki lwentlalo-1990, kodwa kufuneka abantu abaninzi abaye babe umfanekiso awunayo, kufuneka ngaphezulu olujikelezayo yeentengo zemboleko xa umyinge wenzala yangoku libekwe phezulu.
reference | ngetyala olujikelezayo | Amazinga enzala kunye neentlawulo inzala, Yintoni na isihogo kwamatyala ingozi?
olujikelezayo credit Kokoroeyo ngezinto ersatz i (iphepha phezulu) ngezavenge
, intlawulo ngakumbi ukuba ukusetyenziswa yi ixesha elide. Ekubeni izavenge iza kuhlawulwa ngenani amaxesha, kwaye igcina amaxesha 3 Wakuba isigqibo kunye nexesha-3 intlawulo. Kwelinye icala, ukusukela ngetyala olujikelezayo kukuba ukuyibuyisa le mali yimbuyekezo ngenyanga ukuqhubeka zokuthenga kula lamatyala olujikelezayo akuthethi ukuqhubeka, kuya kuba ngakumbi nangakumbi efunde kunokuba.
intlawulo lwenyanga ngokulinganiselwa kwakhe 5000 yen, yaye ukuba bathenge ngetyala olujikelezayo yi yen ngenyanga 20,000 kwaye umahluko 15,000 yen iya kuqhubeka bafumbe ngaphandle kokuba lubuyiswe. Ukuba le meko ukuba elandelwa iya kuba yinto efanayo ukuba ityala 180.000 yen ngonyaka omnye. Ukongeza, iya kongezwa umdla eliphezulu ngomyinge wenzala we-15 ekhulwini kule mali. Ngenxa yesi sizathu, ixesha nazo ziya kubuyiselwa kuqhubeka ukuba uchaze doodling Ukuze uqhubeke phezulu ityala, siza kuqhubeka ukuba nomdla. Ekubeni
imali imvakalelo ukhubazeke
lula olujikelezayo ngetyala debit imali rhoqo ngenyanga, kukho amathuba singaweli kangakanani nokuba zokuthengwa kuthatha kuphela isixa osengqondweni esisigxina. Ngenxa yokuba nkqu ne enkulu iintlawulo zenyanga enye, kukho ingozi yokuba ukusetyenziswa kakhulu. Ngokuba uya kuhlawula ngokwahlukeneyo intlawulo yesavenge ngamnye ukuba iimpahla, waphawula embindini ngokosuku konyuso ngenyanga, unako ukumelana, ezifana uphepha ekuthengeni. Xa credit olujikelezayo, ngaba siyaqonda ukuba ingaba kukho ukuboleka kakhulu ngalo mzuzu Kukho ethile ukuba kunzima ukufumana.
kuphela ixesha elide intlawulo papalata ita
intlawulo yalo ingapheli, kodwa xa umkhwa inkunkuma sasiza, ngaphandle ityala yehliswe kakhulu kunene, oko kuya kuba ukuqhubeka ukuhlawula ngonaphakade amazinga aphezulu umdla. Esijikelezayo letyala ngokuqinisekileyo luncedo, kodwa kuphela bathi iintlawulo zenyanga kufuneka ezincinci, kufuneka ukuba uyazi ukuba uhlawula kululwa intlawulo amazinga aphezulu inzalo.
isibakala sokuba intlawulo encinci, hayi kuphela iye senziwa emva kokuba umthwalo kakhulu. Abantu abaninzi kweyela kumatyala ezininzi uxele kukho imeko yelo xesha elo ngetyala olujikelezayo uye waba komnyango. Makhe usebenzise wazi kakhulu kakuhle.
eziyeleleneyo | of ajikelezayo benefits credit